ZTE Axon 9 Pro: atụmatụ, nkọwapụta teknụzụ na ọnụahịa | Gam akporosis
ZTE kwuputara ọkwa ọhụrụ ya, otu na, dị ka a tụrụ anya ya, na-abịa na Qualcomm Snapdragon 845 processor yana ọtụtụ atụmatụ na nkọwa ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ onye asọmpi siri ike n'ahịa. Anyị na-ekwu maka Axon 9 Pro.
Ngwaọrụ a rutere iji mee ndị ọzọ ma weghara ya Axon 7 malitere na 2016, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ ahụ amaala nọmba asatọ iji kpọọ ekwentị a. Ihe bụ ihe ọzọ, abịa na nchebe megide mmiri na ájá, ihe na-adịkarịghị na mobiles nke ika a. Anyị na-ewetara gị ya!
Axon 9 Pro na-akwado 6.21-inch ogologo AMOLED panel. Nke a bụ mkpebi FullHD + ma nye anyị nhazi akụkụ 18.7: 9 ekele maka akụkụ ya. N'otu oge ahụ, ọ nwere ọkwa dị elu na-agbatị n'elu ya, dị ka ọtụtụ ekwentị ndị ọzọ na ahịa.
A na-akwado ike nke smartphone a dị elu site na a Qualcomm si Snapdragon 845 octa-isi, SoC nke nwere ike ị nye anyị ọsọ ọsọ elekere nke 2.8 GHz ekele maka isi ya Kyro 385. A na-ejikọ chipset a na 6 GB Ram LPDDR4 RAM, 128 GB nke ohere nchekwa dị n'ime -ndị a na-agbasa site na microSD- Ejiri ya site na batrị 4.000 mAh na teknụzụ na-ebu ngwa ngwa.
Banyere anya foto ya, Axon 9 Pro na-akwadebe a 12 na 20MP n'azụ igwefoto abụọ nwere OIS na-elekwasị anya na ikike ndekọ ndekọ 4K. Na ihu, ọ na-etu ọnụ ihe mmetụta nha 20MP na AI.
Banyere atụmatụ ndị ọzọ, na-agba ọsọ Android 8.1 Oreo na ya dị ọcha mbiputeO nwere ọdụ ụgbọ USB Type-C, NFC, nkwado maka ikuku na-akwụ ụgwọ, Bluetooth 5.0 na akwụkwọ IP68 nke na-eme ka mmiri na-enweghị ntụ na uzuzu, ma ọ nweghị njikọ njikọ 3.5mm Jack N'otu oge ahụ, ọ tụrụ 156.5 x 74.5 x 7.9 mm ma tụọ 179 g.
1 ZTE Axon 9 Pro mpempe akwụkwọ
ZTE Axon 9 Pro mpempe akwụkwọ
IKIRU 6.21 "AMOLED FHD + mkpebi
Nhazi Qualcomm Snapdragon 845 octa-isi 2.8GHz max.
Meme ncheta 128GB
Ndị isi Azụ: 12MP (f / 1.75) nke 1.4μm + 20MP (130 Celsius) na ndekọ OIS / 4K. Ihu: 20MP na AI
UMUAKA 4.000mAh na ụgwọ ngwa ngwa
Atụmatụ ndị ọzọ Ihu ihu. Mkpisiaka agụ. MicroUSB -dị-C
Mbibi na ibu ibu 156.5 x 74.5 x 7.9mm / 179g
ZTE's Axon 9 Pro na-efu euro 649 ọ na-achakwa anụnụ anụnụ. Ọ ga-ebu ụzọ rute Jamanị na ngwụcha Septemba ma mesịa ree ya China na Russia. N'oge a, ọ nweghị ihe ọzọ mara maka mbata ya na mba ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » ZTE » ZTE Axon 9 Pro bụ ọrụ: 6.21-inch AMOLED, Snapdragon 845, Android 8.1 Oreo na ndị ọzọ
Download the APK of POCO Launcher now, onye na-ebupụta ngwa nke na-atọ ụtọ dịka "obere"
BlackBerry Key2 LE dị ebe a iji keyboard QWERTY nkịtị wee pụọ onwe ya na asọmpi ahụ